Ihe niile banyere ebe nchekwa Clean-The Mac Cleaner
E nwere dị iche iche ngwa na-eji maka nhicha na Mac OS X ngwaọrụ ebe nchekwa na etiti oge. Ebe nchekwa Clean bụ otu n'ime ndị a software ngwaọrụ. Ebe nchekwa Clean pụrụ ịchọta si App Store ma ọ bụ site a ọnụ ọgụgụ nke saịtị na otu onye nwere ike ibudata ma wụnye mfe. Ebe nchekwa Clean bụ otu n'ime free ngwa hụrụ online.
Nke a ngwa a na-emekarị atụ anya ga-tinye n'ọrụ mgbe otu ji ebe nchekwa-kpụ ọkụ n'ọnụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu nke na-emekarị metụtara fragmenting na blocks nke free ebe nchekwa na onye usoro. Ọ bụrụ na gị usoro si ebe nchekwa e ezughi ezu, ọ pụrụ n'ụzọ dị mfe ịkpata a rụrụ arụ ọrụ. The software na-emekarị na-arụ ọrụ mgbe ọ na-ulo oru, ma ọ bụghị mgbe niile. Ọ na-atụle ga-kasịnụ ngwa optimizing gị Mac-echeta ha. Ọ bụ ihe kasị mma ngwa na-eji mgbe ị gụsịrị-eji a ebe nchekwa (RAM) kpụ ọkụ n'ọnụ na-eji ngwa ma ọ bụ egwuregwu. Ọ nọwo na-na slickest interface na ọrụ enyi na enyi.
Part1: Olee ebe nchekwa Clean Works
Nkebi nke 2: Files akwado site ebe nchekwa Clean
Nkebi nke 3: Atụmatụ maka Olee otú iji Iji ebe nchekwa Clean
Ebe nchekwa Clean arụ ọrụ site n'aka purging Mac si-adịghị ejekwa ozi na ebe nchekwa. Ke adianade do, ebe nchekwa Clean bụ ihe kasị ọdabara mgbe mmechi ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-eji ngwa ị na-adịghị eme atụmatụ iji ọzọ ngwa ngwa n'ime awa ole na ole. Otú ọ dị, ọ dị mma na-aghọta na na usoro nke nhicha ahụ na ebe nchekwa, okenye Macs nwere ike ịkụda ruo mgbe usoro a bụ n'elu. The software a haziri n'ụzọ dị otú ahụ na ị na-enwe ike ịmata ego nke free ebe nchekwa gị nwere tupu na-agba ọsọ Memory Clean nakwa dị ka mgbe. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị nọ na-egwuri egwu a egwuregwu na mgbe ahụ, ọ na-kwụsị, usoro ihe omume ga na-blocks nke na ebe nchekwa echekwabara. Ọ nwere ike na onwe elu fọrọ nke nta 1GB Ram maka ndị ọzọ ngwa. Mgbe free ebe nchekwa tụlee n'okpuru a preset fọrọ ma ọ bụ na ina mgbe ị wepuÚ ihe ngwa, e nwere ntọala nke-enye gị na-akpaghị aka na-agba ọsọ ebe nchekwa dị ọcha.
E nwere nnọọ ọtụtụ nke faịlụ na ike ga-ehichapụ site ebe nchekwa Clean software.
Ngwa fọdụrụ afọdụ
Abụba Binaries na ọtụtụ ndị ọzọ na-enweghị isi data
Nkebi nke 3: Atụmatụ maka Iji ebe nchekwa Clean
Nhicha gị Mac na iji ebe nchekwa Clean dị mkpa ebe ọ gbapụrụ ọsọ gị Mac ịrụ ọrụ. Mma gị na usoro nchekwa mkpa ka ị ọcha draịvụ ike gị. Nke a bụ ihe ná mgbalị iji naputa ọzọ ohere na draịvụ ike gị. Ndị faịlụ na-adịkwaghị mkpa gị usoro ga-ehichapụ dịkwuo ohere na Ya mere mbo mbuli gị Mac-echeta ha.
Ihe mbụ bụ na-emeghe gị Mac si wuru na-Disk Utility omume nke dị na ekpe panel. Ọ bụ ihe amamihe iji jide n'aka na ị na-elele na mbụ Enyemaka taabụ n'ihu na ịpị rụkwaa Disk button na ala-nri akuku gị Mac. Nke a ga-ahụ na-agba ọsọ a ogologo Doppler nke gị Mac si desktọọpụ n'otu oge na-eme ka ọ di ike ebe dị mkpa. Otú ọ dị n'ihi na nke a na-adị irè onye kwesịrị inwe nwere otu nke Mac na ọtụtụ ihe arụnyere na ebe nchekwa dị ọcha.
Olee otú Tọgharia iPhone Paswọdu
Top 5 Software ọcha Mac
Olee otú iPhone Network Ntọala
Olee otú Factory Tọgharia iPhone
Olee otú Naghachi iPad Paswọdu
Olee otú na-ere eji iPhone
Olee otú Ike na Soft Tọgharia iPhone
A Complete Ngwọta n'ihi nhicha MacBook / iMac
CleanMyMac- Hichaa Your Mac
Olee otú Jiri iCloud Nchekwa
Top 6 iPhone Explorer maka Mac na Windows PC Ị nwere ike ịhọrọ Site
Top 3 Ụzọ Igosi iPad Paswọdu Iweghachite
Recuva Alternative maka Mac
5 irè na a pụrụ ịdabere Ụzọ Download Music Free maka PC na Mac
Olee Otú Ị Pụrụ Play ọ bụla Video Formats maka Mac (Yosemite na El Capitan gụnyere)
Olee otú mbubata Sony (DCR na HDR) Video ka Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Best MP3 Roket maka Mac - ịzọpụta ọ bụla YouTube Video ka MP3
Ashampoo maka Mac DVD-ere Ọkụ Software | Free Download
Photo Kalinda Onye kere na 2013 Kalinda Templates
> Resource> Mac> ebe nchekwa Clean-The Mac Cleaner